विश्वास नलाग्ने ! जहाँ खुलम-खुल्ला देह ब्यापार हुन्छ … हेर्नुहोस – पुरा पढ्नुहोस्……
रमेशप्रसाद तिमल्सिना , सार्क राष्ट्रमा बंगलादेश पुग्दा नेपालकै तराई पुगेजस्तो भएको थियो । त्योभन्दा पर पुग्दा अनुभव पनि अलग्गै हुने अपेक्षा थियो । एउटै कार्यालयमा काम गर्ने साथीहरूको जमातमै मिसिएर जाँदा छुट्टै महसुस । मनमा धेरै कुरा खेलिरहे । कस्तो होला थाइल्यान्ड ?
नेपालबाट ११ जनाको टोली थाइल्यान्ड जाँदै थियो । केही साथीले रातारात (थप चार्ज तिरेर) पासपोर्ट बनाएका थिए । उनीहरूको मन त झन् चंगाझैं उडेको थियो ।भिसा लगाउने र टिकेट लिनेजस्ता काम सम्पन्न भए पछि हामी डलरको जोरजाममा लाग्यौं ।
पर्यटक भिसामा घुम्न जान लागेका हामीलाई कम्तीमा १ हजार डलर साटेको प्रमाण मागिँदोरहेछ । चिया पसलमा जति नै ठूला कुरा गरे पनि नियम कानुन त मान्नै प¥यो । हामी सबैले मान्यौं पनि । हुन त यो टोलीमा भएका हामी सबै नियम कानुनभन्दा परको समाज सोच्न नसक्ने खालका छौं । अरूलाई पनि नियम मान्नुपर्छ भनेर पैरवी चलाउनेहरूको जमात भएकाले नियमबाहेकको परिकल्पना हामीसँग थिएन र छैन पनि ।काठमाडौं विमानस्थलमा छँदासम्म स्वदेशी हावा ।
साढे तीन घण्टाको यात्रापछि विदेशी तातो हावा ।प्लेनबाट झर्नेबित्तिकै ‘टुरिस्ट’ † बैंककमा अवतरण हुनुअघि छेवैमा रहेका भार्गवले भन्नुभयो, ‘ल हेर्नुस्, कत्रो सहर ?’
जताततै झिलीमिली † साँच्चै आँखा नै तिरमिराउने खालको थियो । मैले तत्काल जबाफ फर्काइहालें,‘हामीलाई स्वागत गर्न दीप प्रज्ज्वलन गरेका †’ यस्तै यस्तै गफ गर्दागर्दै हाम्रो ‘थाई’ पनि ‘अस्थायी (३–४ दिनका लागि)ल्यान्ड’ भयो थाइल्यान्डमा !विमानस्थलमा एउटा हाइस हामीलाई लिन तम्तयार भएर बसेको रहेछ । त्यहाँबाट उसले हामीलाई बोक्यो पतैयाका लागि । हामी गफगाफमा नै थियौं । ऊ हाम्रो कुरा बुझ्दैनथ्यो हामी उसको कुरा ! ऊ कानमा एयरफोन कोचेर थाई गीत सुन्दै गाडी गुडाउन थाल्यो, हामी गफगाफमा ।
तर, नेपाली ग्राहक हत्तपत्त नफुत्काउने । अरूलाई के गर्छन्, थाहा भएन । नेपालीसँग चाहिँ जुको टाँसिएभैंm टाँसिएरै भए पनि सामान बेच्ने । नेपालकै केही जानेबुझेकाहरूले ‘हाकिम’लाई ‘आफ्नो’ बनाउन र अरूसँगको सम्बन्ध टुटाउन यस्ते हर्कत गर्ने गरेको साथीसंगतबाट थाहा पाइएको थियो ।चाकडी र चाप्लुसी गर्नेहरूले विभिन्न कुरा लगाएर ‘एक गरियो तेल’ नै लगाएर भए पनि हाकिमलाई ‘अन्धो’ बनाएर अरूसँगको सम्बन्ध स्वाहा बनाएर पछि कार्यक्रमहरू नै स्वाहा पारिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । त्यसैले चाकडी र चाप्लुसीबाजलाई टाढा राख्न नसक्नेले न आफ्नो हित गर्न सक्छ न सहकर्मीकै भनिएको होला । -अनलाइनखवरसिधाकुराबाट
Prev‘टिकटक’मा हिट सम्झना पहिलो पटक मिडिया ! : भन्छिन्,- “पल शाहसंग खेल्ने तयारीमा छु” हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
Next“गलबन्दी” पछी शान्ति श्री परियारको स्वरमा नयाँ गित सबैको मन रुवाउने गरिबको आवाज- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
चर्चित नायिका रेखा थापा को बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘मालिका’को धमाकदार ट्रेलर हेर्नुहोस्, (भिडियो सहित)
नेपाल भारत सीमामा काँडेतार लगाउन अखिलको माग पूरा पढ्नूहोस।
पशुपती शर्माको लुट कान्छा लुट पछि सुर्य खड्काको आयो कडा यस्तो गित -एयरपोर्ट काण्ड-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)